नेपाली चर्चित सेलिब्रेटीले होस नै गुमाउँदा यस्तो हालत फोटोहरु - TV Annapurna
नेपाल सबैभन्दा चर्चामा आउने कि त कलाकार कि त राजनेता नै हुन् । अहिले राजनेताहरुको बारेमा भन्दा पनि नेपाली सेलीब्रेटिहरुको बारेमा केही जानकारीहरु पस्कौँ । नेपालीहरुको एउटा बानी सेलिब्रेटीहरु भन्ने वित्तिकै जे पनि गर्न पछि नपर्ने कसैलाई चर्चामा ल्याउन होस या अरु सबै हाम्रै हातमा छ ।
कुनै पनि कलाकारले के बोल्छ ? के खान्छ ? कहाँ जान्छ ? के लाउँछ ? आदि कुराहरुमा पनि हाम्रो चासो राख्ने बानीले छोडेको छैन् ।
यी र यस्तै सानो तिनो कुरामा पनि चासो दिईरहने नेपाली दर्शकहरुको अगाडी कलाकारहरुपनि के कम आफु हिट हुन असावधानी अपनाए जस्तै गरि आफैलाई विवाद र चर्चामा ल्याईरहन्छन् । ।
विवादमा तानिएका केही नेपाली नायिकाका तस्वीरहरु जसले उनीहरु मालफंशनको शिकार भएका छन् ।
यी हुन मालफंशन भएका नेपाली सेलिब्रेटिहरु
अभिनेत्री करिष्मा मानन्धर सधैँ आफूलाई सुन्दर र हट देखाउने प्रयासमा हुन्छिन् । यहि कारण पनि उनले आफ्नो स्तन माथि एक ट्याटु खोपाईन् । जसले उनलाई सेक्सी देखाएको छ ।
ट्याटुलाई मध्यनजर गर्दै प्राय ड्रेसहरु उनी ट्याटु देखाउने गरी नै डिजाईन गर्न लगाउँछिन् । यहि शिलशिलामा उनी गत वर्ष एक कार्यक्रममै वार्डरोब माल फंशनमा परिन् । ट्याटु देखाउने चक्करले उनी समस्यामा परिन् ।
लगाएको ड्रेस फुस्किएपछि करिष्मालाई तनाव भएको थियो । उनले लगाएको गाउन तल झरेपछि उनलाई पर्नु आपत्त परेको थियो ।
त्यसो त करिष्मा यो भन्दा पहिले पनि माल फंशनमा परेकी थिईन् । केही बर्ष पहिले पनि उनले लगाएको छोटो गाउनले भित्रि बस्त्र छोप्न नसकेका कारण उनी चर्चामा आएकी थिईन् ।
सिनेमा लज्जाको बेला अभिनेत्री शिल्पा पोखे्रेल पनि माल फंशनबाट पीडित हुन पुगिन् ।
उनले लगाएको छोटो गाउनले उनलाई धोका दियो । या अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा उनले छोटो लुगा सम्हाल्न सकिनन् ।
उनको लुगाले उनी बस्दा उनको भित्रि बस्त्र नै देखिन पुग्यो ।
जुन केही पत्रकारहरुले आफ्नो क्यामेरामा कैद गरे । उनको यो तस्वीर निकै भाईरल बनेको थियो ।
अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह
दुबईमा सम्पन्न नवौँ नेफ्टा अवार्डमा अभिनेत्री साम्राज्ञी मालफंशनको शिकार भईन् ।
नेफ्टामा उत्कृष्ट नव नायिकाको अवार्ड हात पारेकी उनलाई अवार्डले नभएर उनको लगाएको ड्रेसले चर्चामा ल्याएको हो ।
पिंक कलरको डिजाईनिङ ड्रेसमा सजिएकी उनी अवार्ड पाएर निकै खुसी थिईन् । तर उनको त्यो खुशी भने लामो समय टिक्न सकेन ।
साम्राज्ञीलाई ड्रेसका कारण लज्जित पनि हुनु पर्यो । खास कुरा के भने नेफ्टा अवार्डमा उनी वार्डरोब मालफंशनमा परिन् । उनलाई उनकै ड्रेसले धोका दियो । त्यहि बखत उनलाई केही पत्रकारहरुले क्यामेरामा कैद गरे । जुन सामाजिक सञ्जालमा निकै भाईरल बनेको थियो ।
प्रियंका कार्की दुई पटक मालफंशनमा परेकी छिन् । तर उनको चर्चा त्यस समय भयो जब उनी नाई नभन्नु ल २ को सक्सेस पार्टीमा उपस्थित थिईन् ।
पार्टीमा निलो रंगको मिनिस्कर्ट लगाएकी प्रियंकाले सेतो रंगको भित्रि बस्त्र लगाएकी थिईन् ।
जुन उनको तस्वीरमा स्पष्ट देखिन्छ । प्रियंका जतिसुकै छोटा ड्रेसमा पनि सहज भएर प्रस्तुत हुने अभिनेत्री हुन् । तर त्यस समय उनी मोबाईलमा व्यस्त भएका कारण आफ्नो भित्रि बस्त्र देखिएकै थाहा पाईनन् । मोबाईलमा व्यस्त प्रियंकाका केही तस्वीरहरु क्लिक भए र पछि भाईरल पनि भए ।
निकै नै छोटो ड्रेस लगाएर चाईनिज नयाँ वर्षको कार्यक्रममा प्रस्तुती दिँदै गरेकी अभिनेत्री शुष्मा कार्कीले पनि आफ्नो भित्रि बस्त्र देखिएको पत्तो पाईनन् ।
नृत्यमा माहिर शुष्मा नाचिरहेकी थिईन् तर उनलाई आफू मालफंशनको सिकार भएको पत्तो थिएन । यो कुरा सन् २०१२, मलेसियामा सम्पन्न एक कार्यक्रमको हो ।
त्यसो त शुष्माले आफ्नो परिचय छोटो पहिरनमा रमाउने अभिनेत्रीकै रुपमा बनाएकी छिन् । तर जति सुकै छोटो ड्रेस लगाउने अभिनेत्रीहरु पनि आफ्नो भित्रि बस्त्र देखिएको थाहा पाउँदा भने निकै नै लज्जित हुन्छन् ।
तपाईँ कहिल्यै माल फंशनमा पर्नु भएको छ भनेर सोध्दा अभिनेत्री बेनिशा हमालले भनिन्, परेको छु । तर यस बारेमा म बोल्न चाहान्न भनेर उनले प्रसंग नै बदलिन् ।
आफूलाई छोटो ड्रेसमा हट एण्ड बोल्ड देखाउन मन पराउने बेनीशालाई एकपटक लुगाले धोका दिएको छ ।
सन् २०१४ मा एक कार्यक्रममा उपस्थित उनी रातो रंगको गाउनमा सजिएकी थिईन् ।
उनको गाउनबाट सजिलै भित्रि बस्त्र देखिएको थियो, जुन कुरा त्यतीबेला उनलाई थाहै भएन ।
बक्स अफिस अवार्ड नोमिनेशनको क्रममा झरना थापा पनि मालफंशनमा परिन् ।
उनले लगाएको छोटो गाउनले उनको भित्रि बस्त्र पनि छोप्न सकेन जसका कारण उनको पिंक कलरको भित्रि बस्त्र देखिन गयो । पिंक कलरको भित्रि बस्त्र देखिएपछि झरनाका बारेमा नकारात्मक टिप्पणीहरु भएका थिए ।
सिने जगतमा यसरी पटक पटक नायिकाहरु मालफंशन अर्थात लुगाले दिने धोकाबाट लज्जित र आलोचित भए पनि मौका मिल्ने वित्तिकै पुस माघको जाडो नभनी गोप्य अंग देखिने गरी छोटो पहिरन लगाउन पछि पर्दैनन् ।
सायद मिडियाको सामु आफू जहिले पनि हट एण्ड सेक्सि देखिउँ भन्ने मानसिकता अभिनेत्रीहरुको दिमागमा व्याप्त छ ।